ShweMinThar: “​သွေးရည်​ကြည် နှင့်​ အသစ်​တဖန်​ ပြန်​လည်​ သန်​စွမ်းခြင်း ​ဆေးပညာ”
“​သွေးရည်​ကြည် နှင့်​ အသစ်​တဖန်​ ပြန်​လည်​ သန်​စွမ်းခြင်း ​ဆေးပညာ”
(PRP Platelets Rich Plasma and Regenerative Medicine)
​သွေးဆိုတဲ့ အရာကို ထိ​တွေ့ကိုင်​တွယ်​ လုပ်​ကိုင်​ရရင်​ ​သွေးရည်​ကြည်​ဖြစ်​ဖြစ်​ ဘာဖြစ်​ဖြစ်​ ​ရောဂါပိုးကူးစက်​နိုင်​တဲ့ အန္တရာယ်​ရှိတယ်​ဆိုတာ ကျ​တော်​တို့​တွေ မ​မွေးခင်​ကတည်းက လူတိုင်းသိပြီးသားပါ...
တကယ်​တန်း အန္တရာယ်​ အရှိဆုံးက ကိုင်​တွယ်​ ကုသ​ပေးရတဲ့ ဆရာဝန်​ ဆရာမ နဲ့ ပညာရှင်​​တွေပါ.... ဒီရက်ပိုင်း ထူးထူးခြားခြား ​​သွေး​တွေနဲ့ ကုတိုင်း ဘာဖြစ်​ ညာဖြစ်​ မှာလား လို့ တချိန်​လုံးတန်းစီ လာ​မေး​နေကြ​တော့ အစက ​တစ်​​ယောက်​ချင်းပြန်​​ပြောပြ​နေ​ပေမဲ့ အခု​တော့ လာလာ​​မေး ကြသူ အများစု လာ လာပြ​နေတဲ့ အ​ခြေအမြစ်​မရှိ ပညာမရှိ အကိုးအကားမရှိ
ဘဲ လူတိုင်းနားလည်​ပြီးသား အ​ခြေခံ အချက်​အလက်လေး​ ​တွေကို ငါ့စကားနွားရ ​ရေးထားတဲ့ သာမန်​ စာစု ( ပညာသည်​ မျက်စိနဲ့ ကြည့် ​ပညာရှင်ေ​ပတံနဲ့တိုင်းဟဲ့ ဆိုရင် ​​​​​သတင်းလို့​ခေါ်ဖို့​တောင်​ အဆင့်​မရှိဘူးထင်​တာပဲ) တစ်​ခု ကို မြင်​​တော့ လာလာ​မေး​နေကြတဲ့ မိတ်​​ဆွေ​တွေ လူနာ​တွေ သူငယ်​ချင်း​တွေ အတွက်​ ဒီစာတို​လေး ​ရေးပါရ​စေ.......
​သွေးရည်​ကြည်​ ကုထုံးဆိုတာ ဟာ နံမည်​ကြီး ​နေတဲ့ Vampire facelift ဆိုတာ​လေး တစ်​ခု တည်းအတွက်​ ရှိ​နေတဲ့ ကုထုံးတစ်​ရပ်​မဟုတ်​ပါ...
​သွေးရည်​ကြည်​ကုထုံးဆိုတာ ​သွေး​တွေယူ မျက်​နှာထဲ​လျောက်​ထိုး ​လျောက်​ လှိမ့်​​နေတာ ဆိုပြီး ​ပြောရ​လောက်​​အောင်​ လွယ်​ကူ ​သော ကုသမှု တစ်​ရပ်​မဟုတ်​ပါ…
မျက်​နှာ အတွက်​ ကုသ သည့်​ ​နေရာမှာ​တောင်​ ကုသ​ပေးသူရဲ့ ကျွမ်းကျင်​မှု ​​​ပေါင်းစပ်​ကုသနိုင်​မှု ​စတဲ့အချက်​ ​တွေ​ပေါ် မူတည်​ပြီး ကုသမှု ရလာဒ်​​တွေ အလွန်​ကွာခြား​သော ကုသမှုမျိုးပါ…
ေ​ဆးပညာ တွင် ထိပ်တန်း​​ ကိုင်းခွဲတစ်​ခုဖြစ်​​သော Regenerative Medicine တွင်​ ​သွေးရည်​ကြည်​ အ​ခြေခံ ကုသမှု ကုထုံးများမှာ အ​ခြေခံ အကျ​ ဆုံး ​​သော ကုထုံးများထဲက တစ်​ခု ဖြစ်​ပြီး မျက်​နှာ အ​ရေပြား အလှ အပ တွက်​သာ မက ကိုယ်​ခန္ဓာတွင်​ Aging အိုမင်းမှု and Degeneration ယိုယွင်းပျက်​စီးမှု​ကြောင့်​ ဖြစ်​​သော ပျက်​စီးမှု များကို Biomolecular level /Cellular level အ​ခြေခံ အေ​သးစိတ်​ကျ​သော ဆဲလ်​ကလပ်​စည်း အဆင့်​မှ သည်​ organ/ tissue level အင်္ဂါရပ်​ အသားစ အဆင့်​ အထိ ကုသ ပြုပြင်​ ထိန်းညှိ​ပေး​သော အ​ခြေ ခံ ကုသမှု တစ်​ရပ်​ပါ…..
​သွေးရည်​ကြည်​​လေးထုတ်​ မျက်​နှာ​လေးကုတာ​ပေါ့ ဆံပင်​​လေးထိုးတာ​ပေါ့လို့ လွယ်​လွယ်​​လေး လုပ်​လို့ရ​သော အရာမဟုတ်​ပါ… လက်​ရှိကုသ​ပေး​နေသူပညာရှင် ​အားလုံးကလည်း အချိန်​တို အတွင်းရလာ​သော ရလာဒ်​များ အတွက်​ ​ပျော်​ရွှင်​ ဝမ်း​မြောက်​စွာ မိမိတို့ လူနာများ client များ မိတ်​​ဆွေများအတွက်​ *မိမိတို့ တွင်​ risk များ မှန်းသိလျက်​နှင့်​ results ​ကောင်း​တွေ အတွက်​ ကုသ​နေကြခြင်းပါ…. တကယ်​တန်း​တော့ ​သွေးရည်​ကြည်​ကုထုံး​လောက် အ​သေးစိတ်​ ​သော အလုပ်​ရှုပ်​​သော လက်​ဝင်​​သော အန္တရာယ်​များ​သော ကုသမှု ​ဆေးခန်းများတွင်​ သိပ်​မရှိပါ….
မိမိ ပိုင်ဆိုင်လာ ​သော ရလာဒ်​ ​​ကောင်းများ ​အပြင် မိမိ ​ဆရာဝန်​နှင့်​ အပြန်​အလှန် ​ဆောက်​တည်​ထား​သော ယုံကြည်မှုများေ​ပျာ်​ရွှင်မှုများ ကို ဘာမဟုတ်​တဲ့ စာတိုေ​ပစ တစ်ခု ​ကြောင့်​ အေ​နှာင့်အယှက်မဖြစ်ေ​စချင်​ ပါ…..
အကြမ်းပျင်း အနှစ်​ချုပ်​ ပြရလျှင်​
PRP ဆို​သော ​သွေးရည်​ကြည်​ ကုထုံး တွင်​ အဓိက နှစ်​ပိုင်း ရှိပါသည်​… သူ့ကို အဓိကထားကု​သော Stand alone/ main therapeutic options နှင့် ​သူ့ကို ​ပေါင်းစပ်​ကုသ​သော Integrative therapeutic options ဆိုပြီး အလွယ်​ မြင်​သာ​အောင်​​ပြောလို့ရပါသည်​….
​သွေးရည်​ကြည်​ ကို အများစု သိပြီးသား
PRP + Collagen Stimulating/ Induction Therapy (mostly done by microdermabrasion)
PRP vampire face lift ဆိုတာ အပြင်​
- PRP microneedling and mesotherapy
- PRP Face, Neck and Hand Rejuvenation therapy with or without cellular stimulating peptide therapy
- PRP problem skin treatment like acne, oily skin, black spots and age related skin degenerations
- PRP combined therapy with Cellular toxin face lifing or Collagen thread lifting
- PRP combined therapy with Stem cell extract and Mesenchymal Stem Cells MSCs
- PRP induced growth factor promoting treatments for atheletic people and sick patients
- PRP based scar and scratch mark treatments
- PRP based hair restoration with or without peptide therapy and light therapy ဆိုတာမျိုး​တွေ အပြင်​
- PRP based Biofiller
- PRP based sexual rejuvenation treatments with or without stem cell extract and peptide therapy
- Type V LA PRP (Light Activated PRP therapy)
- PRP combined APIC Autologous Protease Inhibitor Concentrate Therapy
- PRP based healing promoting and pain reducing treatments with Interlukin blockers
- PRP combined with Nitrogen retention therapy with or without Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT
- PRP based regenerative treatment combining with myostatin blockers ကဲ့သို့ advanced therapeutic options များစွာ ရှိပါသည်​….
- PRFM Platelets Rich Fibrin Matrix
- PRP based plasma biofiller
- Autologous fat transfer combining with PRP
- PRP combined ADSC Adipose derived Stem Cell Therapy
- PRP combined Lipogems
ဆိုတာ​တွေက​နေ ***** VSEL Very Small Embryonic Like Stem Cells ဟု​ခေါ်​သော အဆင့်​မြင့်​ Autologous Stem Cell ကုသမှု​တွေ အထိပါ ရှိပါသည်​…..
အခု ​ပြောခဲ့သမျှ ကုသမှု အားလုံးဟာ ASEAN regional countries ​တွေအများစုမှာ​တောင်​ available ဖြစ်​ပြီး ကျွန်​​တော လက် ရှိ ​ fellowship training ယူ​နေ​သော EWVM centre ခွဲ အားလုံးတွင်​ Germany မှ စ၍ ထိုင်း မ​လေးရှား အဆုံး VSEL stem cell ထုတ်​သည့်​ ကိုယ်ပိုင့််​ lab များမှအပါအဝင်​​​ အထက်​ပါ process အားလုံး ကို European standard SOP and Protocols များ ဖြင့်​ apply လုပ်​ ကုသ​နေ​သော ကုသမှုများဖြစ်​ပါသည်​…ကျွန်​​တော်​ ကိုယ်​တိုင်​လည်း Training component and fellowship portfolio အရ ထို ကုသမှုများတွင် ​​​​processing, consultation and treatments ပိုင်း မှသည်​ protocol updates, research data collection and analysis, advanced training and evidence based guidelines updates အထိ ​နေ့စဉ်​ ပါဝင်​ ပြီး training ယူ​နေရပါသည်​….
ထို့​ကြောင့်​ ပညာရပ်​ဆိုင်​ရာ ​မေးသမျှ ​ဖြေပါမည်​…​သေချာ ​ပြောရရင်​ သိချင်​လို့ ညှိချင်​လို့ ​မေးသမျှ ​ဖြေပါမည်​…. ရိ ချင်​လို့ ​မေးတာ​တွေ အတွက်​​တော့ တခု ကြို​ပြောပါရ​စေ… **** စာ အရင်​ဖတ်​ခဲ့ပါ…(​တွေ့တာ ​ကောက်​ဖတ်​လာတာကို စာလို့ မသတ်​မှတ်​ပါ​နော်​) အ​သေးစိတ်​မသိ​တောင်​ ကျွန်​​တော်​ ​ရေးထားတဲ့ treatment list ​လေး အရင်​ နားလည်​​အောင်​ ​တော့ အနိမ့်​ဆုံး လုပ်​ခဲ့ပါ လို့…. *** ရိ တာ ကို ပြန်​ အ ရိ ခံ နိုင်​ဖို့ ရစ်​တာကို ပြန်​ အရစ်​ ခံ နိုင်​ဖို့ ကြို ပြင်​ခဲ့ပါ လို့…….
Aging related problems များ Degenerative diseases များ နှင့် ​Advanced level diseases များတွင် ဘယ်လို ကုသမှုမျိုးများရှိသည်… ဘာေ​​​ကြာင့် ကုသ ရသည်….ေ​​နာက်ကွယ်က Evidenced based science က ဘာဖြစ်​သည်… ဘယ်​ နိုင်ငံေ​​​​တွ ဘယ်​ centre ကြီး​တွေမှာ ဘယ်​လို ​တွေ ကုသ​နေသည်ေ​အာင်မြင်​​မှု ​ဘယ်လို​တွေ ရ​နေသည်​ စသည့် အချက်အလက်များ နှင့်​​​​ ​​ဆွေး​နွေး မှု များ ​တော့ ဒီ စာတွင်မေ​ရး​​တော့ပါ…. ​ရေးရန် လည်း မလိုဟု ထင်​ပါသည်​…. ဘာလို့လည်းဆိုေ​​တာ့ စာဆိုတာ ဖတ်​လို့ရပါသည်​…. ရှာဖတ်လို့ ရပါသည်​​… လူတိုင်း အတွက်​ ရှိ​နေ​သော သြဇာတိက္ကမ ကြီးမား​သော ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမားသည့်​ မီဒီယာ ကြီးများ အဆင့်​မှသည် ​​ပညာရှင်ဆန်ဆန် ဖတ်လိုသူများအတွက် Google scholar လို အ​ခြေခံ အကျဆုံး မှPubmed, Scopus to the Chocrane library လို Gold standard Evidence များ ထိ ရှိ​​နေပါသည်​……
ပြည်သူကို အသိနှင့် သတိ​ပေးလိုပါသည် ဆိုေ​သာ ​စေတနာ ကြီးလှပါ သည် ဆို​သော မီဒီယာ ပညာရှင်များ နှင့် နယ်ပယ်ရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ အေ​နဖြင့်လည်း သိပ္ပံ ပညာဟာ ယုံကြည်ရာ မဟုတ်​ပါ… အ​ခြေခံကျေ​​သာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ evidence များကို အ​ခြေခံ ထားပြီး ရလာဒ်များကို ဆိုးေ​​​ကာင်း ကျိုးေ​ကြာင်း ခွဲ ခြမ်း စိတ်​ဖြာပြီး လိုက်ေ​​လျာ ညီ​ထွေ လိုအပ်​သလို အသုံးချ ကုသ ရ​သော ပညာ ပါ…. မ​ရေးခင် ​​မပြောခင်​ စာ​လေး ​တော့ ရှာဖတ် ကြပါ… Analysis and Reflection သုံးသပ် စိတ်​ဖြာ ခွဲ ခြမ်းမှုေ​လးေ​​​တာ့ ​သေချာ လုပ်ကြပါ…. ​
မီဒီယာ သမား​ရော… ပညာရှင် သမား​ရော…. ဘာမှန်းမသိ အေ​​ကာင့်အတု ​တွေနဲ့ အပုတ်အတင်း လုပ်သတင်းဖြစ်ပြီးေ​​​​​​ရာ ဆိုတဲ့ စာစု ​ရေးသူ​တွေ​ရော….. ကို ​ရေးမဲ့ စာကို ​​သေချာ မတတ်​မဖတ် မပြင်​ဆင်​ဘဲ ​ရေးတာ… ကိုယ်သန်ရာ သန်​ရာ အဆင့်​တူရာ တူရာ အကိုးအကားေ​​​လာက်ပဲ ကြုံ သလို ဖတ်​ ​ရေးချင်​တာ ​ရေးလိုက်တာေ​​တွက တကယ်တန်းေ​​တာ့ ဖတ်ရသူ အကျိုးမပွား အဆိုးများတာေ​နာက်​ထားပြီး အရင်​ဆုံး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဖင်ေ​​​​​ပြာင်ကြီးနဲ့ လူကြားထဲ ထွက် က ပြ ​နေသလို အရှက် ဗျန်းဗျန်း ကွဲ ရတာ​​လေးေ​​​​​​တာ့ သတိ ချပ်ကြပါ ဦးလို့………
ေ​လး စား စွာ ဖြင့် ….ေ​စ တနာ ဗ လပွ ဖြင့်​…..
Dr. Thet Lwin
(European Wellness Villa Medica,
Centre for Regenerative Medicine, Germany)
& Medical Advisor (IVLyfe Wellness)